လူမျိုးရေးဆန်လာသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲများကြောင့် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲမည့်အရေးကို စိုးရ? - Yangon Media Group
လူမျိုးရေးဆန်လာသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲများကြောင့် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲမည့်အရေးကို စိုးရ?
ရန်ကုန်၊ မတ် ၃ဝ- လူမျိုးရေးဆန် လာသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲများ ကြောင့် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမည့် အရေးကို စိုးရိမ်မိကြောင်း ၈၈ မျိုး ဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမြအေးက ပြောသည်။
မတ် ၃ဝ ရက် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် ”ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြဿနာ” ဆွေးနွေးပွဲမှ စုစည်းရရှိချက်များ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီး ရခိုင် အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာများ ၏ မေးမြန်းမှုကို ¤င်းက အထက် ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေက ကျွန်တော်စိုးရိမ်တဲ့ အချက်က ဘာ ဖြစ်လဲဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Identity က ရှေ့ရောက်လာပြီး တော့ လူမျိုးရေး ဆန်လာတယ်။ အဲဒါ မကောင်းဘူးဗျ။ တိုင်းပြည်အတွက် မကောင်းဘူး။ ဖက်ဒရယ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် မကောင်းတာတင်မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမှုအရေးကိုပါ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် ရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုနားလည်ရမှာက တိုင်းရင်းသားတွေက ဘာကြောင့် ဒီလောက် စိတ်ခံစားမှုတွေ များလာတာလဲ။ ဒါကတော့ ရိုးရိုးသားသား ပြောမယ် ဆိုရင် အရမ်းဖိလို့ပဲလေ။ ဒါကြီးကို စစ်နဲ့သွားပြီးတော့ ဖြေရှင်းတဲ့ဟာ ကိုတော့ ကျွန်တော် သိပ်သဘော မကျဘူး”ဟု ¤င်းက ဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ တွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန် သည့်အပေါ်ကိုလည်း ပြန်လည်သုံး သပ်သင့်ကြောင်း ¤င်းကဆိုသည်။
”လုံခြုံရေးအမြင်ချည်းနဲ့ပဲ ဒီ ကိစ္စကို စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ဒါနိုင်ငံ ရေးပြဿနာ”ဟု ¤င်းကဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာသည် တဖြည်းဖြည်းကြီး ထွားလာပြီး ဒေါက်တာအေးမောင် အား ထောင် နှစ်ရှည်ချလိုက်ခြင်း သည်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ် အပေါ်များစွာ သက်ရောက်နိုင် ကြောင်း ¤င်းက သုံးသပ်သည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်အား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် မသတ်မှတ်ကြောင်း အာဏာရပါတီ၏ ပြောဆိုချက်ကိုလည်း လက်မခံ နိုင်ကြောင်း ဦးမြအေးက ဆက်လက် ပြောသည်။
”ရခိုင်ပြဿနာက ကြီးတယ်ဗျ။ ကြီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း စိုးရိမ်တယ်။ ဥပမာဗျာ။ နိုင်ငံရေးမှာ အယူအဆ တူတာရှိမယ်၊ မတူတာရှိမယ်။ မတူတိုင်း ရန်သူမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် မြင်တယ်လေ။ အခု ဒေါက်တာအေးမောင်ကိစ္စဆို ရင်လည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သိပ် သဘောမကျဘူး။ ဒေါက်တာအေး မောင်ကို ဒီလိုမျိုး နှစ်အများကြီး ထောင်ချတာဟာ ဒါငြိမ်းချမ်းရေးမှာ သွားပြီးတော့ သက်ရောက်တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင် က နိုင်ငံရေး အယူအဆက မတူ ဘူးနော်။ ပြောင်းပြန်။ ဒါပေမဲ့ မဆိုင် ဘူးလေ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအ ဖြစ် အသိအမှတ် မပြုဘူးဆိုတော့ ပိုဆိုးသွားပြီ။ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ ဒါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ပဲ။ ကိုယ်နဲ့မတူတိုင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သွားပြောလို့မရဘူး။ ဒါ နည်း နည်းလွဲနေတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင် တယ်”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။
အဂတိလိုက်စားလျှင် နယ်ပြောင်းသည့်ဝန်ထမ်းများရော၊ အငြိမ်းစားယူသွားသူများကိုပါ ပင်စင်သိမ်း
ကျပ်သိန်း ၁၅ဝ ပေးရုံဖြင့် သော့အပ်မည့် တိုက်ခန်းများပါဝင်သော အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲ ပြုလု
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ဖောက်ပြန်မှု အများဆုံးဖြစ်နေဟု မီဒီယာကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌပြော
ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ ဖုန်းထဲမှ အချက်အလက်များကို သက်သေခံအဖြစ် တရားရုံးလက်ခံ
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် အစီအစဉ်ဆိုင်းငံ့မှု ရှုပ်ထွေးသော တုံ့ပြန်မှုမျာ??